Home News Qaar ka mida Mushaxiriinta iyo Mucaaradka Dowlad G/ka Koonfur Galbeed oo ku...
Qaar ka mida Mushaxiriinta iyo Mucaaradka Dowlad G/ka Koonfur Galbeed oo ku shiray Nairobi (Sawiro)
Waxaa maanta ka dhacay Magaalada Nayroobi kulan qado ah oo ay isugu yimaadeen qaar ka mida musharixiinta Doorashada Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Kulankaan oo wadatashi ahaa ayaa looga hadlay sidii loo abuuri lahaa mucaarad midaysan oo xilka kala wareego Madaxweyne Sharif Xassan sidoo kale Waxaa la isku waafaqay in aan marnaba la ogolaanin in sharif Xassan sameeyo ku darsasho marka waqtigiisa dhamaato.
Waxaa sidoo kale kulankaas la isla meel dhigay in xubnaha mucaaradka iyo musharixiinta kale ee aan waqti u helin kulankaan loo yeero si loo qabto kulan balaaran. Waxaana lagu Balamay in bisha Agoosto hiraanteeda kulan wayn lagu qabto Magaalada Baydhabo. Dadka reer Koonfur Galbeed ayaa waxaa ay dooran doonaan Madaxwyne bisha Nofeembar ee sanadkan.
Previous articleR/Wasaaraha oo ku Xanaaqay Sarreeyeyaasha (Generals) Ciidanka.
Next articleRadio Dalsan: 14 Sarkaal Oo Loo Xiray Weerarkii Xarumaha Wasaaradaha Arrimaha Gudaha Iyo Amniga
Duqa Muqdisho oo Laba Isbuuc Dagana Hoteel Ku Yala Muqdisho iyo...